16-ka kulan ee arcade ee ugu wanaagsan Android, ma haysataa dhammaantood? | Androidsis
Jose Alfocea | | Ciyaaraha Android
Ereyga arcade Waa eray aad u baahsan oo caan ku ah qaybta ciyaarta fiidiyowga. Si adag u hadla, waxay u jeeddaa taas mashiinada ciyaarta fiidiyowga ee aan ka heli jirnay goobaha dadweynaha sida baararka, makhaayadaha kafeega, xarumaha wax laga gado iyo arcad. Waxay caan ku noqdeen sideetameeyadii iyo sagaashannadii, badanaa sababtuna waxay tahay maadaama aysan khamaarin ama aysan sharad dhiganayn, ma aysan lahayn xayiraad sharci oo badan.
Si kastaba ha noqotee, waqti kadib, ereyga arcade ayaa isbeddelay waxaanan hadda u isticmaalnaa tixraac ciyaaraha fiidiyowga ee caadiga ahCiyaaraha fiidiyowga ee qaabdhismeedka jirka ah oo na xusuusinaya makiinadahaas aan horay u soo sheegnay. Badanaa waa ciyaaro fudud fudud in la ciyaaroIlaa iyo inta makaanikada ay ka walwalsan yihiin, taas oo sawirada cajiibka ah ama teknoolojiyada casriga ahi badanaa aan loo baahnayn. Intaas waxaa sii dheer, waxay leeyihiin caan caan ah, mana aha oo kaliya ciyaartooyda waayeelka ah, laakiin sidoo kale dhammaan ciyaartoydaas kuwa ka hela wax ka duwan nooc ka mid ah ciyaarta oo aysan ogeyn waqtigaas. Iyo sida mawduucaaga, waxaad ka heli doontaa ciyaaro arcade noocyo badan oo kala duwanLaga soo bilaabo barnaamijyada, kuwa wax toogta ama jinsiyadaha, ilaa dagaalka, ficilka, isboortiga ama tacaburka. Oo hadda, annaga oo aan ka hadal, waxaan kuu soo bandhigaynaa a xulashada qaar ka mid ah ciyaaraha ugu fiican ee arcade ee loogu talagalay Android. Ku raaxeyso oo baashaal!
3 Ciyaaraha YooB
4 Super Jungle Adduunka
5 Joometri Dash Lite
8 Wadohoose Surfers
9 Way gaajoodeen, Shark Evolution
10 Dunida 3aad ee Lep
11 Piano dusiyeen 2
13 Fantasy Final
'Fernanfloo' dhexdeeda waxaad ka qaadan doontaa aqoonsiga dabeecaddan soo jiidashada leh ee ay tahay inuu sameeyo la kulan ciidan dhan oo xayawaan ah oo kaa hor istaagaya inaad la xiriirto taageerayaashaada. Furo dharka cusub ee Fernanfloo oo horay u soco heerka kadib adoo kaashanaya awood-siiyayaal, ciyaar aad u xiiso badan oo madadaalo sare leh oo sidoo kale makaanik fudud, laakiin had iyo jeer aan fududeyn.
"Temple Run" waa riwaayad xiiso leh oo xiiso leh taas oo ay tahay inaad ku dhex socoto nooc kasta oo caqabado ah, inaad ka boodbo buuraha iyo waxbadan oo intaa le'eg oo lacag ururin ah iyo awood urursi. Isticmaalayaasha ayaa ku sifeeya sida aad u xiiso badan oo balwad leh, mana ka maqnaadaan iota sabab.
Sida laga dheehan karo cinwaankeeda, "Ciyaaraha YooB" maahan oo kaliya ciyaar, laakiin waa dhameystiran madal isku dhafan in ka badan siddeetan kulan kala duwan oo leh noocyo kala duwan, mawduucyo iyo runtii qaybo ballaadhan oo ka socda ciyaaro orodyahanno aan dhammaad lahayn ama qaabka Tetris, ilaa ciyaaraha dagaallada iyo dagaalladda, jinsiyadaha iyo socodka mararka qaarkood ee gaajaysan.
Super Jungle Adduunka
Ciyaarta iyo halyeeyga "Super Jungle World" ayaa aad iyo aad u xusuusin doonta Super Mario Bross. Waxay ku saabsan tahay a ciyaar orod aan dhammaad lahayn oo ay tahay inaad ka booddid oo aad xitaa dab ku rido si aad uga leexato daraasiin caqabado ah oo ka takhalusi cadawga iyada oo loo marayo kontaroolada awood u leh.
"Super Jungle World" wuxuu leeyahay sawiro aad u qosol badan, midabbo iyo midabbo kala duwan leh, iyo in ka badan 199 heerar oo dhib ah, sidaas madadaalo ayaa loo damaanad qaaday saacado badan oo ciyaaro ah.
Joometri Dash Lite
«Joometri Dash Lite» waa a madal classic ku raran ficil iyo xawaare frenetic. Tirooyinka joomatari ayaa ah halyeeyada ciyaartan oo aad dooneysid inaad tijaabiso xirfadahaaga si aad jidkaaga uga dhigto "marinnada halista ah iyo caqabadaha fiiqan", ama bood bood, rogrog, sameynta pirouettes aan macquul ahayn oo hawada ah iyo xitaa rogista sharciyada cuf isjiidasho.
Developer: Ciyaaraha RobTop
Ciyaar kale oo uu dhiirrigeliyey Super Mario Bross waa "Super Andrio 2", ciyaar ay dabeecaddeeda ugu weyn, Andrio, leedahay hadafka badbaadinta amiiradda ay afduubeen bahallada. Tan awgeed waa inaad ordo, boodi, dul boodbood dhufaysyo badan, adoo ka cararaya tan caqabado iyo garaacista daraasiin heerar dhib ah. Shaki la'aan, ciyaar kale oo baaxad weyn oo xamaasad leh oo aad ku raaxeysan doonto tanno xiiso leh. Iyo dabcan, ha iloobin inaad soo qabato dhammaan walxaha loo heli karo tan, maxaa yeelay markaa kaliya ayaa waxaad heli doontaa dhibco aad nolosha ku beddelan karto.
'' Zombie Tsunami '' mowjado dad aan dhiman ayaa ku soo duulay oo burburiyey magaalada, iyagoo cunay qof kasta oo nool oo jidkiisa ku jira. Miyaad u maleyneysaa in ujeedadaadu noqon doonto inaad ka badbaado zombies-ka? Ma ahan taas, waxaad u baahan doontaa inaad maamusho si aad u soo qabato aadanaha. Inbadan oo bini'aadamka ah oo aad soo qabato, lacag badan ayaad heli doontaa taas oo aad kuheli karto awood-kicin kaa caawineysa inaad baabi'iso wax kasta oo aad ka hesho wadadaada.
Developer: Mobigame SARL
Gudaha «Subway Surfers» waxaad ka qaadan doontaa aqoonsiga skateboarder, haddii uusan xirfadle ahayn, ku dhowaad, yaa saaran skateboardkiisa ka baxsado kormeeraha booliska iyo eeygiisa. Si tan loo sameeyo waa inaad raacdaa wadada tareenka laakiin dabcan, tareenadu ma sahlana haba yaraatee markaa waa inaad ka leexataa intaad ururinayso lacag badan inta suurto galka ah si aad u kordhiso awoodaada iyo xawaarahaaga adoo samaynaya jaranjarooyin aan macquul ahayn.
Developer: Ciyaaraha SYBO
Way gaajoodeen, Shark Evolution
In "E Hungry Shark Evolution" waxaad horeyba u qiyaasi kartaa qofka dhabta ah ee jilaa-yaasha ah, shark aad u gaajaysan. Waa ciyaar ficil-buuran, ciyaar biyo saameyn ku leh halka aad joogtid waxaad qaadan doontaa garka shark gaajaysan oo cunaya wax kasta oo jidkiisa ku jira; Baro adduunyo cusub iyo uun abuur cusub oo badda dusheeda ah, raadso khasnado cusub, qorto shark yar sida ciidankaaga, u babac dhig asxaabtaada iyo waxyaabo kaloo badan. Aah! Oo weliba waxaad astaysto sharkyada.
Dunida 3aad ee Lep
«Lep's World 3» waa sharaf ciyaarta platformer iyo tartanka waxaa jilaya Lep, nin Irish ah oo saaxiibtinimo iyo qosol leh oo tuuladiisa quruxda badan iyo iswaafajinta ah ay si kadis ah ugu soo weerari doonaan kooxo xunxun oo xumaan qaata kuwaas oo iyagu qaata maalqabeenadan gobl oo dhammaantood qafaasha. Hagaag, qof walba marka laga reebo Lep.
Bixi hadda aad tahay, iyo himiladaadu waxay noqon doontaa samatabixi dhammaan dadka waddanka adigoo ordaya, boodboodaya kuna siibanaaya heerarka 120 dhibaato iyo shan adduunyo oo layaableh. Waxa kale oo lagaa doonayaa inaad ka adkaato shan cadow oo waaweyn oo aad soo ururiso ujeeddooyin aad ku heli doonto xirfado kaa caawin doona hadafkaaga.
Piano dusiyeen 2
"Piano Tiles 2" waa ciyaar aad u fudud, laakiin ma ahan mid sahlan. Iyada oo ay waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku ciyaartid daraasiin heeso ah oo noocyo kala duwan leh oo biyaano ah, laakiin waa inaad feejignaataa oo aanad fashilmin wakhti kasta. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad la tartanto ciyaartoy kale meel kasta oo aad adduunka ka joogtid oo aad "la qabatimto" inaad fuusho boosaska qiimeynta adduunka
Tiirarka Piano 2 ™
Developer: Ciyaaraha Cheetah
"Flippy Knife" waa ciyaar raaceysa wadadii caanka ahayd ee muranka dhalisay Flappy Bird in kastoo markan ay ku saabsan tahay tuuraya mindiyo si ay ugu dhacaan habka saxda ah. Sidaad qiyaasi karto, ciyaartu uma sahlana sida taas oo kale maxaa yeelay way leedahay hababka ciyaarta kala duwanLaga soo bilaabo fuulista derbi haysta mindi ilaa siyaabo kala duwan oo loo tuurayo mindiyo, oo ay ku jiraan qaab arcade oo ku lug lahaan doona ka gudubka heerarka kala duwan ee dhibaatada. Miyaad mindida ku dhejin doontaa dariiqa saxda ah mise waxaad ku tuuri doontaa qaab uu ku garaaco meeshuu u baahnaa kuna dhaco? Tijaabi farsamadaada iyo awoodaada inaad ku gaarto xoogga saxda ah iyo janjeerka. Aah! Mana jiraan mindiyo kaliya, laakiin sidoo kale seefo, faasas iyo wixii la mid ah in ka badan soddon hub kala duwan laakiin dhammaantood aad u fiiqan.
Developer: Ciyaaraha Beresnev
Xul xul ah arcade ama ciyaaraha retro ugu fiican, weligaa ma seegi kartid "Final Fantasy IV", mid ka mid ah kuwa ugu caansan Ciyaaraha RPG (Doorka Ciyaarta) oo uu abuuray Nintendo. Cinwaanka afaraad ee sagaalku wuxuu calaamadeeyay dhibic gaareysa heerar sare oo caan ah markii ugu horeysay oo lagu daro Nidaamka Dagaalka Waqtiga Firfircoon (ATB) iyo nidaam u oggolaanaya ku wareejinta awoodaha iyo awooda ciyaartoy kale si ay gacan ugu siiyaan dagaalka.
Iyada oo ku saleysan nooca loogu talagalay Nintendo DS ee la sii daayay 2008, "Final Fantasy IV" ee aaladaha Android muuqaalada Sawirada 3D, shaqo dhiibasho weyn iyo saacado iyo saacado tacabur.
DHAMMAAD FINAL AH IV (3D REMAKE)
Waxaan soo sheegnay Mario Bross dhowr jeer, laakiin hadda waa waqtigii aan soo qaadan lahayn "Super Mario Run" oo ka mid ah kuwa ugu fiican ciyaaraha arcade ee aaladaha Android. La bilaabay wax ka yar sanad ka hor, wuxuu hayaa nuxurka ciyaarta caadiga ah in saacado aad iyo aad u tiro badan ay inaga xadeen caruur ahaan. A ciyaar orodyahan aan dhammaad lahayn oo ka dhex muuqda adduunyo badan iyo heerar kala duwan, oo aad ku ciyaari karto hal far kaliya, taasina waxay abuuri doontaa balwad aanad waligaa hore u soo marin.
Dabeecad kale oo caan ah oo adduunka ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga waa buluuga hedgehog Sonic, oo guushiisii ​​weyneyd ay u horseeday inuu u ekaado sawirka shirkaddii dhalatay, Sega. Dukaanka Play-ka waxaad ku leedahay cinwaano dhowr ah oo uu ku jilayo Sonic, laakiin halkan waxaan ku soo qaadaneynaa "Sonic Dash", oo ah tacabur waad xakameyn doontaa huudhan oo waxaad ku ordi doontaa xawaaraha ugu sarreeya adigoo maraya meelaha 3D iyadoo laga fogaanayo caqabado badan, kala duwan oo adag. Haddii "Super Mario Run" uu ballanqaado saacado xiiso leh, "Sonic Dash" ma ahan mid aad uga dambeeya.
Ku dhowaad astaan ​​sideetamaadkii iyo qayb ka mid ah sagaashamaadkii. "Pac-Man" waa laga yaabaa ciyaarta ugu wakiilka iyo ciyaarta caadiga ah ee arcades waqtigaas. Ku safri shaybaar intaad cunaysid kubbadaha tamarta, daciifinaya cirfiidka si aad u cuni karto ka hor intaanay dib u helin awooddooda. Devour, cun oo cun oo kaydso dhibco si loo simo. Si fudud loo ciyaaro, laakiin sii kordheysa oo ay adag tahay in la garaaco, PAC-MAN waa ciyaar la yaab leh oo la qabatimo iyo madadaalo leh oo qaadan doonta saacado hurdadaada ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha Arcade
Furashada sanduuqa iyo aragtida koowaad ee Oukitel K10000 MAX
Huawei Mate 10 wuxuu la imaan doonaa batari weyn oo 4000 mAh ah